Home Wararka DEG DEG: MW Farmajo iyo Kheyre: “Guddoomiye isku shaandhee Guddoomiyayaasha guddiyada Barlamanka...
DEG DEG: MW Farmajo iyo Kheyre: “Guddoomiye isku shaandhee Guddoomiyayaasha guddiyada Barlamanka haddii kale!”
MOL ayaa heshay xog lagu kalsoon yahay taasoo sheegeysa in amar lagu siiyey Guddoomiyaha Barlamanka mudane Maxamed Mursal inuu isku shaandheeyo Guddoomiyayasha gudiyada Barlamanka oo dhamaantood la isku badalo. Kulan adag oo xalay dhex maray Gudoomiyaha Barlamanka oo dhinac ah iyo MW Farmajo oo ay la safan yihiin Kheyre iyo xertiisa ayaa lagu go’aamiyey in guddiyayada la isku shaandheeyo sidii inay magacaabis ku yimaadeen oo kale.
Guddoomiyayaasha guddiyada Barlamanka waa la doortay waxaana lagu doortay cod aqlabiyad leh, waxana ansixiyey barlamanka. Sidaas darted inuu guddoonka Barlamanka uu markuu rabo kala diro, mid kalana uu yiraahdo waan isku kiin shaandheyn waa jebin distuurka iyo xeer hoosadka Barlamanka waasa haddii ay image oggolaadaan.
Marka guddi uu soo helo musuqmaasuq iyo ku takrifal awoodeed in la yiraahdo “Guddoomiyahan ha lagu badalo kaas oo ay nala tahay inuu dhuuniraac yahay” waa sharcidarro ay tahay maanta in laga waantoobo.
MOL waxay helysaa in lagu heshiiyey ina la isku shaandheeyo guddiyada iyadoo ay ku xigi dooonto in daaqadda laga saaro kii la doono maadaama la awooday in la isku shaandheeyo.
Arrintaan waa gef weyn oo ummadda ay ka galeen haddii gudomiyayaasha guddiyada ay oggolaadaan ummaddana waligeed ma cafin doonto.
MOL waxay hadda daba joogtaa magacyada gudoomiyayasha gudiyada Barlamanka si mid waliba ay miisaanka u saarto maalinta uu ogolaado in shuruucda uu wax ku yahay la burburiyo.
Sidoo kale taariikhda ayuu gali doonaa guddoomiyaha Barlamanka haddii uu amarkan fuliyo.
Previous articledowladda Soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay xilliga sidda rasmiga ah ay dib loogu bilaabi doono bixinta Baasaboorka Soomaaliga
Next articleDhismaha gudigga la dagaalanka musuqmaasuqa oo khliaaf ka dhex abuuray RW Kheyre iyo MW Farmaajo
Askar ka wadatirsan ciidamada Somaliland oo isku rasaaseeyay Magaalada Hargeysa
MW Ahmed Madoobe oo casuumad afur u sameeyay golaha isbadal doonka...